Ginger | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otu esi eto eto na ite: akuku na ilekọta osisi
Ekwesiri ikwu na ụlọ nke ginger siri ike. Ụfọdụ ndị nchọpụta kwenyere na ebe obibi ya bụ India, ndị ọzọ - n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọzọkwa, o siri ike ikwu ọbụna ebe ọ si n'ala anyị: site na West ma ọ bụ East. Taa, a na-eji ya eme ihe na nkà mmụta ọgwụ, nri, ma maka ịzụlite n'ụlọ ọ bụghị mgbe niile.
Ihe mejupụtara nke ginger: uru bara uru na contraindications
Ginger bụ ihe nnọchiteanya pụrụ iche nke osisi. A na eji ya ma na nri na na nkà mmụta ọgwụ. N'ebe anyị nọ, n'oge na-adịbeghị anya, a kwụsịrị ile ya anya dị ka ihe. Mana osisi a maara maka ihe karịrị puku afọ abụọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ihe ndị ahụ, ihe onwunwe na mmetụta nke ginger na ahụ. Ginger: ngwakọta nke osisi ahụ Ginger nwere mmiri, nnukwu mineral bara uru (magnesium, phosphorus, calcium, sodium, iron, zinc, potassium, chromium, manganese, silicon), vitamin (A, B1, B2, B3, C, E, K), acid fatty acids (oleic, caprylic, linoleic), protein, gụnyere amino acids (leucine, valine, isoleucine, threonine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan), asparagine, acid glutamic, nakwa abụba, carbohydrates (sugars).
Kedu ka ntinye tii si bara uru, ma o bu ihe ojo
Ginger tii bụ ihe ọṅụṅụ ga-enyere gị aka inweta ahụ ike na nkwekọ ime mmụọ. A na-eji ya agwọ ọrịa oge ochie nke India na China, site na nke ahụ mesịrị banye na Yurop ma ruo ụbọchị anyị n 'ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị agbanwe agbanwe. Ginger tii Na ụwa ugbu a, e nwere ihe dịka iri atọ nke ginger, na ole ụdị ginger tii - na ịghara idepụta.
Strawberry "Masha": àgwà nke iche iche na cultivation agrotechnology
Nkọwa zuru ezu nke cylinder biiti dịgasị iche iche ma kwe nkwa na-eto eto ma na-echekwa ihe ọkụkụ ahụ
Otu esi akụ na-eto eto ixora n'ụlọ gị
Mkpụrụ / Transplanting Sansevieria: Home Care
Kedu otu esi ekpuchi yucca maka oyi? Kedu ka esi eme ndokwa ezumike n'ụlọ?